Kulan Lagu Gorfaynayay Wakaalada Caymiska Caafimaad ka DDSI - Cakaara News
Kulan Lagu Gorfaynayay Wakaalada Caymiska Caafimaad ka DDSI
Jigjiga(CN) Arbac, 30 December 2015, Kulan ay ujeedadisu tahay ka faa iidaysiga adeega Caymiska Caafimaadka iyo sidii fahan buuxa looga siinlahaa shaqaalaha DDSI ayaa maanta kadhacay guriga shirarka ee madaxtooyada, waxaana kasoo qaybgalay Madaxwayne Kuxigeenada DDSI, Masuuliyiinta Xafiisyada sida Wasiirrada, Maareyayaasha, Gudiyada maaraynta xafiisyada iyo Masuuliyiin kasocotay Wakaalda Caymiska Caafimaadka JDFI.
Kulankan ayaa waxaa Ugu horayn kahadlay Wasiirka caafimaadka DDSI Mudane Cabdi-fataax Siciid wuxuuna sheegay in dadaalada loogu jiro adeega caafimaadka ay tahay mid balaadhan oo aan kala go lahayn islamarkaana si loo tayeeyo adeega caafimaadka wadeenkeena ay kajirto Wakaalada Caymiska Caafimaadka oo wadamada horamaray oo kaliya ay leeyihiin.
Waxa uuna masuulku intaa kudaray inwakaalada caymiska caafimaadka si rasmi ah looga furay magaalada Jigjga islamaraakaan ay ka faa iidaysan doonaan shaqaalaha DDSI & waliba bulshawaynta deegaanka. Ugu danbayna waxa wasiirku sheegay in dhawaan wakaaladan laga furi doono magaalada Qabridahar.
Sidookale waxaa kulankan ka hadlay maareeye kuxigeenka wakaalada caymiska JDFI Mudane Cabdi jaliil waxuuna sheegay in adeegan caymiska caafimadk markii ugu horaysay si tijaabo ah looga aas aasay deegaanka Amhara & Oromada islamrkaana la'go'aamiyay in dalkoo dhan lagaadhsiiyo, waxa uuna masuulku hadalkiisi ku gaba gabeeyay in aadeegan caymiska caafimaadku aad muhiim ugu yahay bulshawaynta dalka.
Sidaas darted waxaa iyana fikiro muhiima oo dhax gala kasoo jeediayay madax wayne ku xigeenka DDSI ahna wasiirka waxbarashada DDSI Mudane Mawliid Hayir Xasan iyo waliba qaarkamida wasiirada xafiisyada, iyo shaqaalihii kale ee kasoo qaybgalay kulanka.